Roma 1-2 Ac Milan, Rossoneri Oo Guul Ka Gaartay Kooxda Roma, Iyo Inter Milan Oo Ka Badisay Udinese
HomeWararka CiyaarahaRoma 1-2 Ac Milan, Rossoneri oo guul ka gaartay kooxda Roma, iyo Inter Milan oo ka badisay Udinese
November 1, 2021 Wararka Ciyaaraha, Falanqeynta Kulamada, Horyaalka Italy 0
kooxda Roma ayaa guul daro kala kulantay kooxda Ac Milan kulan ka tirsan Horyaalka Serie A oo ku soo dhamaaday 1-2.
Xidiga Zlatan Ibrahimović ayaa Ac Milan ka Caawiyay goolashada Caawa kadib markii uu dhaliyay laad Xur ah Halka uu goolka kale uu ahaa Rigoore isaga lagu galay qaladkeeda.
Kooxda Ac Milan ayaa qabatay hogaanka ciyaarta Daqiiqadii 26aad markii uu laad xur ah uu u dhaliyay Zlatan Ibrahimović kaasi oo kubad awood badan oo hoos ah ka dhaliyay goolhayaha kooxda Roma iyadoo goolkaasi lagu kala nastay qeybta hore.
Ac Milan ayaa heshay goolka labaad daqiiqadii 50aad waxana mar kale shabaqa soo taabtay Zlatan Ibrahimović lakin Goolkaasi ayaa laga diiday markii dib loo eegay Var.
7 Daqiiqo kadib Ac Milan ayaa hogaanka dheereesatay markii Qalad lagu galay Ibrahimović waxana rigooradii loo dhigay u soo istaagay F. Kessie kaasi oo gool u badalay.
Ac Milan ayaa u muuqatay mid kubada ku feecneyd ilaa daqiiqadii 66aad markaasi oo kaarka cas la siiyay T. Hernandez Waxana Roma ay sameysay Weerar badan iyadoo ugu danbeyn heshay goolka calanka waxana u saxiixay Stephan El Shaarawy Daqiiqadii 90aad oo lagu daray 3 daqiiqo.
Dhanka kale Inter Milan ayaa guul ka gaartay Kooxda Udinese iyadoo ugu badisay laboo gool uu ka caawiyay xidiga Joaquín Correa.
Natiijo ahaan Ac Milan ayaa hada ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka iyadoo leh 31 dhibcood oo ay la wadaagto Napoli oo hogaanka horyaalka heysa iyadoo leh 31 dhibcood halka inter Milan oo ku jirta booska 3aad ay leedahay 26 dhibcood.